Iingcebiso kunye namacebo okwazi ukuyicoca i-oveni yakho ngokwendalo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ucoca njani i-oveni
Amaxesha amaninzi kufuneka sicoce ikhitshi kwaye sihlala sisoyika ukuqala ngento enye: ukucoca i-oveni. Ngokwesiqhelo, iimveliso zokucoca kufuneka zisetyenziswe ngendlela ecwangcisiweyo ukuze singonakalisi okanye simuncwe ngumsi onetyhefu ngelixa siwuhlamba. Ke ngoko, kuya kufuneka uyazi ukuba zeziphi iimveliso onokukhetha kuzo phakathi kwezigidi zentengiso.
Kule posi, siza kukucacisela ukucoca njani i-oveni ngendlela efanelekileyo ukuthintela ukonakalisa indalo okanye ubume besixhobo.
1 Iimveliso zokucoca ezifanelekileyo
3 Isoda yokubhaka kwaye uxube neviniga
4 Igwele, ityuwa kunye nelamuni
Iimveliso zokucoca ezifanelekileyo
Ukucoca i-oveni, kuya kufuneka uyazi ukuba ukhetha njani kumawaka eemveliso kwintengiso yazo. Kukho ezinye iindlela zendalo ezisebenza ngokuchanekileyo njengeekhemikhali kunye neziphumo ezilungileyo kakhulu. Ingxaki ephambili evela kwiimveliso zamachiza kukuba bathambekele ekucaphukiseni amehlo, i-mucosa kwaye bashiye ivumba elingathandekiyo ekhitshini kuphela, kodwa kuyo yonke indlu.
Iimveliso zendalo zisetyenzisiwe ekhayeni ubomi bonke ukucoca kwaye namhlanje, siza kusebenzisa ezi mveliso ukucoca i-oveni. Ngokwesiqhelo, xa sithetha ngemveliso yendalo ibonakala inzima kwaye ayizukusebenza. Kuyafana nangezifo. Iyeza elenziwe ngemichiza lihlala likhethwa ekusebenziseni amayeza endalo angenabungqina bokusebenza. Nangona kunjalo, kule meko, kuyangqinwa ukuba ezi mveliso zendalo zisebenza ngokuchanekileyo kwaye ngaphezulu koku azisayi kwenzakalisa okusingqongileyo okanye zishiye umoya onetyhefu ekhaya.
Iikumkani zokucoca kwendalo ziilamuni kunye neviniga. Ukuba sihamba nale mveliso kunye nebicarbonate, sifumana umxube osebenza kakuhle. IBicarbonate yimveliso yekhemikhali kodwa inokusetyenziswa okungenabungozi kwaye kudla ngokuthathwa kwiziselo ezihlwahlwazayo ukunyanga igesi esiswini kunye nobunzima ngokubanzi. Le ndibaniselwano inegama elihle lokususa yonke igrisi kunye nokungcola ehovini. Ngumsebenzi ekufuneka wenziwe rhoqo ekhaya kodwa uhlala usonqena.
Ukucoca i-oveni, iviniga, nokuba ivumba alikho mnandi kwaphela, yinto enokubambisana. Inezinto ezahlukeneyo zokulwa neentsholongwane kunye nezibulala ntsholongwane, ikwasetyenziselwa ngokubanzi ukucoca iziqhamo kunye nemifuno ngaphambi kokuyitya. Inketho elungileyo kukulungiselela ukutshiza ngebhotile yamanzi kunye neviniga yomxube. Sigcina umlinganiselo weenxalenye ezintathu zamanzi kunye ne-3 yeviniga kuphela. Ngale ndlela, umxube awuzukunuka kakubi.
Akufanele ukhathazeke ukuba livumba leviniga ekuqaleni, kuba livumba elishiya ngokukhawuleza. Esi sitshizi sisetyenziselwa ukutshiza iindonga ze-oveni. Ukwenza oku, siya kuyisebenzisa kwaye siyivumele ukuba isebenze imizuzu embalwa. Nje ukuba lidlulile elo xesha, siya kuyisula ngamanzi kwaye sibone iziphumo.
Ukuba i-oveni ayingcolanga kakhulu, ngekhe kube yimfuneko ukwenza ucoceko olunzulu. Yenza nje into ngokukhawuleza. Singagcwalisa itreyi ngeiglasi ezi-2 zamanzi ashushu kunye ne-1 yeviniga. Siguqula i-oveni yaya kwi-degrees ezingama-200 kwaye siyishiya ibaleka kangangemizuzu engama-30. Emva koko, siya kusula ilaphu elifumileyo kwiindonga ze-oveni, kwiglasi, njl. Uya kubona ukuba umphunga ovela kwiviniga uya kuba ngaphezulu kwanele ukuba lonke udaka luphume lodwa.
Isoda yokubhaka kwaye uxube neviniga
Isoda yokubhaka inenani elingenasiphelo lokusetyenziswa kwekhaya. Yimveliso ebiza kakhulu esinokuyifumana naphina. Siza kuchaza indlela yokucoceka i-oveni ngesoda yokubhaka. Kuya kufuneka uyitshize ngqo emazantsi ukuba kukho intsalela yokutya okunamathelisiweyo kunye nokutshiza emva koko ngamanzi kunye neviniga yokutshiza esiyichazile ngasentla.
Enye indlela efanelekileyo yokusebenzisa isoda yokwenza isoda kukudibanisa isoda, amanzi kunye neviniga. Olu cwecwe luyenza incamathele bhetele kwaye inokusetyenziswa kwiindonga ze-oveni. Kufuneka ubeke isitya ngeepunipoli ezili-10 zesoda yokubhaka, ama-4 amanzi ashushu kunye ne-3 yeviniga. Ngalo mxube, siyakongeza iviniga kancinci kancinci, kuba iyakusabela inyusa amagwebu. UKUBA sibona ukuba lo mxube ululwelo kakhulu, siza kongeza enye i-bicarbonate.
Emva koko, siya kuwusasaza wonke lo mxube kwaye siya kugxininisa ngakumbi kwiindawo ezingcolileyo okanye ezinokutya okuseleyo. Siwuvumela lo mxube ukuba usebenze iiyure ezimbalwa. Ukuba ubumdaka buphezulu ngokwaneleyo, siya kuwuyeka usebenze ngokukhawuleza. Akudingeki ukuba sihlikihle, kuba ngalo mxube, ubumdaka buziphuma buzihambela bodwa. Ukuba sifuna ukukhawulezisa inkqubo kuba sinexesha elincinci, sivula i-oveni kwaye siyivumele isebenze okwethutyana ngomxube ongaphakathi. Oku kuyakwenza ukungcola ehovini kucime ngokukhawuleza.
Igwele, ityuwa kunye nelamuni
Yenye imveliso enceda ukucoca i-oveni. Inhlama esele siyenzile ngesoda yokubhaka kunye neviniga inokwenziwa kunye nembiliso kunye neviniga. Lo mxube awusetyenziswa kangako, Kuba kuyimfuneko ukusebenzisa igwele elininzi. Isoda yokubhaka iyathandwa kuba iyakhawuleza kwaye isebenze ngakumbi. Nangona kunjalo, siza kuchaza indlela yokucoceka i-oveni ngegwele.
Yenza nje umxube njengangaphambili apho siza kongeza iiglasi zamanzi kunye neviniga ngomlinganiselo ofanayo nowangaphambili, kodwa ngegwele de umxube ube uqinile okanye ungaphantsi njengepasta.
Ukuba asinayo iviniga endlwini, singasebenzisa ityuwa erhabaxa. Singayisebenzisa kwakhona ukuba ivumba leviniga liyasikhathaza ngakumbi. Singayifaka iviniga endaweni yetyuwa, ekwayiyintsholongwane. Iya kusinceda siphelise amavumba amabi, ngakumbi ukuba silungiselele iintlanzi eontini. Kuya kufuneka sishiye itreyi ye-oveni, songeze ityuwa ngejusi yelamuni kunye nepeel kwaye siyenze isebenze. Kungcono ukusebenzisa ubushushu obuyintsalela emva kokusebenzisa i-oveni ukwenza iintlanzi.
Ngale ndlela, ungacoca i-oveni ngaphandle kwevumba elibi. Umphunga unceda ukususa ukungcola ngokulula.
Ndiyathemba ukuba ngala maqhinga uyazi ukucoca i-oveni ngaphandle kweekhemikhali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Ucoca njani i-oveni
Inkcazo yophuhliso oluzinzileyo